Col. Xasan Maxamed Nuur (Shaatigaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka – idalenews.com
Col. Xasan Maxamed Nuur (Shaatigaduud) oo horay u soo noqday Wasiir iyo Xildhibaan ayaa xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka, halkaasoo in muddo ah uu ku xanuunsanaa.
Shaatigaduud ayaa ka mid ahaa hogaamiye kooxeedyadii siyaasada ee Soomaaliya, isagoo ahaa Hogaamiyihii Jabhadii RRA ee Gobolada Bay iyo Bakool sanadkii 1995-tii ku dagaalamay maleeshiyadii Jen. Ceydiid.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray Allaha u naxariistee Siyaasiga Xasan Maxamed Nuur (Shaati Gaduud) oo xalay ku geeriyooday dalka Jarmalka.
Jabhadii RRA ee uu hogaaminayay Col. Shaatigaduud ayaa u kala jabtay garabyo xilligii Shirkii Eldoret ka socday, iyadoo garabyada u jabay ay kala hogaaminayeen Maxamed Ibraahim Xaabsade iyo Sheekh Aadan Madoobe, kadib dagaalo ka dhacay Baydhabo.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa yiri “INAA LILAAHI WA INAA ILEEYHI RAAJICUUN, waxaa saakay nasoo gaartay inuu xalay gelinkii dambe ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Jarmalka siyaasiga Xasan Maxamed Nuur (Shaati Gaduud) runtii waa geeri naxdin leh”
Col. Shaatigaduud ayaa dowladihii KMG ka soo noqday Wasiir, isagoo mar noqday Wasiirka Maaliyada, waxaana intii uu xanuunsanaa xubinimadiia baarlamaanka sanadkii 2011 loo dhaariyay C/casiis Laftagareen oo ay isku beel ahaayeen.
Ra’iisul Wasaare Saacid oo booqashadiisa u horeysay oo dibada ku aaday qaar ka tirsan wadamada deriska